Artificial Intelligence Nyanzvi DGene Inotangisa muHollywood | NAB Ratidza Nhau | 2021 NAB Ratidza Media Partner uye Mugadziri weNAB Ratidza LIVE. Broadcast Injiniya Nhau
musha » nhau » Artificial Intelligence Nyanzvi DGene Inotangisa muHollywood
Artificial Intelligence Nyanzvi DGene Inotangisa muHollywood
Yemberi tekinoroji kambani inopa AI mhinduro dzekugadzira zvemukati, zvinosanganisira vatambi vechokwadi, kugadzirwa chaiko, zvinoonekwa, uye kudzoreredzwa kwemafirimu.
LOS ANGELES-DGene, Silicon Valley neShanghai-based yekuvandudza yeAI tekinoroji, yatanga mashandiro mu Los Angeles. Iyo kambani iri kugadzira software uye masevhisi ayo anowedzera ekunyepedzera ungwaru uye komputa yekuona yevaraidzo zvisikwa zvemukati. DGene inopa mhinduro dzemakambani ekugadzirwa chaiko, zvinoonekwa, kudzoreredzwa kwedhijitari, volumetric uye holographic capture, uye kugadzirwa kwevatambi chaivo uye vanoita zvemadhijitari
DGene inotungamirwa naJason Yang saChief Technology Technology uye Helena Packer seMutevedzeri Wemutungamiri Mukuru. Yang inyanzvi yeMIT-yakadzidziswa musayendisiti, DGene co-muvambi, uye aimbova Senior Manager kukambani yemiconductor AMD. Packer igoridhe firimu uye terevhizheni yekuona mhedzisiro maneja, ane makadhi anosanganisira X2: X-Varume Vakabatana, 21 Jump Street, uye Charlie Wilson Hondo.
Yang naPacker vaunganidza timu yemasayendisiti emakomputa uye mainjiniya anoshanda mukuona kwemakomputa, komputa yemifananidzo, grafiki yemakomputa, kudzidza kwemuchina, uye matekinoroji akafanana. Basa reUS richapindawo mukuvandudzwa kwakakura uye zviwanikwa zveR&D zveDGene, China, iyo yakaburitsa yekuvhuvhuta AI mhinduro kumakambani akadai seAlibaba, Tencent, uye China Mobile.
Sekureva kwaYang, DGene inotsvaga kushanda nema studio, ekushambadzira masevhisi, ekuona zvinoonekwa studio, uye nevamwe vekudyidzana mukushandisa matekinoroji anotungamirwa neAI kumhanyisa kufambiswa kwemabasa, kudzikisa mutengo, uye kugadzira mafomu matsva ezviratidziro zvemukati. "Isu tinopa mhinduro dzinorerutsa tsika dzezvinhu zvekuona zvigadzirwa kugadzirwa, kudzoreredza firimu, uye kugadzirwa chaiko," anodaro. “Tine zvakare maturusi anoita kuti kugadzirwa kwezvinhu zvebudiriro, zvakaita sevatambi chaivo. AI haisisiri tekinoroji yeramangwana; iri kukurumidza kuve inoenderana nezvinhu zvakawanda zvekugadzira zvemukati. ”
DGene parizvino iri kushanda pamwe Academy Award-kuhwina cinematographer uye anoonekwa ekutanga piyona Richard Edlund pane yakanyorwa yakateedzana inosanganisira nhoroondo. Iyo hunyanzvi inogona kutungamira kune chaiwo vatambi uye holograms vanoita uye vanotaurirana sevanhu chaivo.
Pamusoro pezvo, kambani iri kubatana nayo Hollywood-based MTI Film kuisa AI-based maturusi kudzoreredza firimu. Yakagadzira yeAI algorithms ekudzoreredza ruvara uye kupinza, kugadzikana kwemufananidzo, guruva uye kukwenya kubvisa, uye zvimwe zvakawanda zvakajairika maitiro. Maturusi akafanana anogona kushandiswa kurerutsa zvinoonekwa kuumbika uye kugadzirwa chaiko.
DGene ndiye anotungamira mupi wevolumetric capture muChina ine mhinduro dzayo dzechokwadi dzekuvakazve 3D, zvichiita kuti zvikwanise kutora matambiro uye nharaunda kubva mumaonero mazhinji uye kuzvishandura kuita zvinhu zve3D, zvichionekwa kubva chero kupi. Iyo zvakare yakagadzira tekinoroji yekuyerera holograms mune chaiyo-nguva, kunyorera uko kunogona kushandiswa kumakonzati uye kumwe kuratidzwa kwehupenyu.
Packer anoti AI tekinoroji ichaunza shanduko yakakosha kune akasiyana maficha ekugadzira. "Zviratidzo zvinoonekwa, kururamisa ruvara, green screen, uye kudzoreredza kwedhijitari hazvina kufambira mberi zvakanyanya mumakumi emakore," anotsanangura. “Pakave nekuvandudzwa kuri kuwedzera, asi hapana chinokanganisa. AI, kune rimwe divi, inomiririra shanduko yechokwadi. Kusvetuka kukuru kuenda kumberi. ”
DGene yakavambwa mu2016 neboka revatungamiriri vanogadzira kuona mumakomputa, mifananidzo yemakomputa, uye huchenjeri hwekugadzira. Inotsigirwa neShanghai Alliance Investment Ltd, Alibaba, GSR Ventures, SAIF Partners, IDG Capital, uye Chobe Capital.
DGene iri kushandisa simba reAI uye humwe hunyanzvi hunowanikwa hwehunyanzvi hwekugadzira zvemukati. Isu tinopa mhinduro dzekuvhuvhuta dzevatambi veAI, kugadzirwa chaiko, zvinoonekwa, madhiraivha edhijitari, real-time holograms, kuvakazve 3D, uye zvimwe zvinoshandiswa. Yedu AI-inotyairwa chikuva inorerutsa uye inokasira maitiro ekugadzira zvinobudirira zvemukati, kupa simba maartist, kuwedzera kugona, nekusimudzira kutaura ngano.
DGene yakavambwa nepfungwa dzakajeka mukuchenjera kwekunyepedzera, kuona kwemakomputa, uye mifananidzo yemakomputa. Isu takagadzira yepasirose yekutanga simba, chiedza-munda kupfura, uye gore kugadzirisa system. Isu takagadzirawo yekutanga sisitimu yekutora ine simba, 3D mhando dzevanhu. Unyanzvi hwedu hwakaiswa mukugadzirwa kwemafirimu neterevhizheni, kunyorera nharembozha, zviitiko zvetsika, nezvimwe.
MPSE Filmmaker Mubairo Honoree George Miller uye Inonzwika Ruzha rwe "Mad Max: Fury Road" - April 12, 2021
Rugwaro Rwemavara Steve Beganyi Anobatana neGoldcrest Post - April 12, 2021
Artificial Intelligence Nyanzvi DGene Inotangisa muHollywood - April 7, 2021
chakagadzirwa Intelligence Migumisiro Yokuona 2021-04-07
Previous: SES Inosarudza Telestream SDI / IP Waveform Monitor & QC kuNew Remotely Operated Playout Center
Zvadaro: LED Fresnel Inogadzirwa neChishanu-Year Warranty